"Geela haddey naceen annaga macaawino ahaan hannoo siiyaan" - BBC News Somali
8 Jannaayo 2020
Image caption Gela waxaa markii ugu horreysay Australia la geeyay qarnigii 19-aad
Sidoo kale qaar ka mid ah fardaha ku dhaqan gobolkaas ayaa la dili doonaa.
Soomaalidu sidey u arkaan geela la leynayo?
Abuukar Xaaji Xaashi "Culusoow", waa nin ka ganacsada hilibka geela oo ku sugan Australia. Wuxuu ka hadlayaa sida ay u samaeyneyso leynta geela.
'Geela haddey naceen annaga macaawino ahaan hannoo siiyaan ama aan ka doonanno'
Dadka Soomaalida ah geelu wuxuu agtooda ka yahay hantida ugu qaalisan adduunka, waxayna dhaqan u leeyihiin dhaqashadiisa.
Nin hilibka geela ku iibiya Australia oo ka hadlay geela lagu laynayo dalkaas
Maxaa Soomaalida ka galay geela Australia?
Cabdullaahi Carab Ismaaciil oo ka mid ah dadka geela ku dhaqda Somaliland ayaa su'aashaas uga jawaabay BBC-da.
Cimilada sababtay in Geela la laayo
Australia ayaa xilligan oo kale sanad walba waxaa ka jira cimilo aad u kulul, taasoo sababta inuu kuleyl dartiis dab uga kaco keymaha.
Image caption Shaqaalaha dabdamiska ee ka howlgalayay gobolka New South Wales
Qeybaha bariga iyo Koonfurta waddankaas ayey gaartay saameynta ugu badan ee cimilada kulul.
Tobannaankii sano ee ugu dambeysay waxay Australia noqoneysay meel ka kulul sidii ay horay u ahayd, waxaana la saadaalinayaa inuu kuleylka kusii badan doono.
Seynisyahannada ayaa muddo dheer ka digayay dhibaatada ka imaan karta cimiladan kulul, iyagoo sheegayay inuu dabka keymaha sidii hore ka khasaare badnaan karo.